Muchidzidzo ichi, isu tichapa ruzivo nezve yekumisikidzwa kwechikoro cheGerman, makirasi eGerman, mazita ekirasi, mune mamwe mazwi, madhipatimendi echikoro cheGerman. Izvo zvikamu zvechikoro cheGerman zvinowanzo kuve zvinotevera. Isu tinopa nzvimbo yedu kutanga nezvinoonekwa. Ipapo isu tichazopa yakanyorwa runyorwa rwemadhipatimendi echikoro muchiGerman.
ChiGerman chemistry murabhoritari
Kamuri yevadzidzisi veGerman
Bindu rechikoro cheGerman
ChiGerman biology lab
Kamuri yemakomputa yeGerman
ChiGerman fizikisi lab
Madhipatimendi echikoro cheGerman
kufa Bibliothek: Raibhurari
der Schulhof: Bindu rechikoro
der Computerraum: Kamuri yemakomputa
das Chemielabor: chemistry lab
das Physiklabor: Fizikisi lab
das Biologielabor: Biology lab
das Lehrerzimmer: Imba yemudzidzisi
kufa Sporthalle: Gym